ချွန်ထက်ကွေးနှငျ့ပွညျ့စုံတစ်ဦးအခက်အခဲအကျပ်အတည်းများက '' 2019 ဟနျဂရေီ Grand Prix - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeလောကဥရောပ36 ဟန်ဂေရီချွန်ထက်ကွေးနှငျ့ပွညျ့စုံတစ်ဦးအခက်အခဲအကျပ်အတည်းများက '' 2019 ဟနျဂရေီ Grand Prix ''
02 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 36 ဟန်ဂေရီ, ဥရောပ, လောက, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ 0
ချွန်ထက်ခါးဆစ်ဟနျဂရေီ Grand Prix နှင့်ပြည့်စုံတစ်ဦးရန်ပွဲ
လေယာဉ်မှူးများ၏ကျယ်ပြန့်အများစု, kartingl ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များသို့တိုးမြှင်ပြီ အဆိုပါ Hungaroring ချွန်ထက်ကွေး၏ဘူဒါပက်ပဒေသာအနီးနှင့်လည်းနိမ့်ဆုံးပျမ်းမျှအားမြန်နှုန်းနှင့်အတူခြေရာခံဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ထိုကာလ၏အကြှနျုပျကိုသတိပေးနေပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင်ကမုန့်စိမ်းအပန်းဖြေဖို့အခွင့်အလမ်းမပေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်ဒီတာယာ cornering ၏လွယ်ကူခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌မဆိုလိုပါ။ Pirelli ထို့ကြောင့်လည်းခက်ခဲသည့်ဟန်ဂေရီပြိုင်ပွဲများအတွက်စီးရီး၏အလယ်တွင်တည်ရှိသော C2, C3 အလတ်စားနှင့်အပျော့တာယာအကြံပြု C4 ။ Hungaroring မကြာခဏနှေးကွေးခြင်းနှင့်အများအပြားဆက်တိုက်ထောင့်ပါရှိသည်။ ဤသည်ကိုလည်းတာယာအလုပ်ရှာခြင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်နိုင်ခြင်းဆိုလိုတာကအေးမြဖြစ်ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။
အဆိုပါ Hungaroring အတွက်လက်ရှိပျှမ်းမျှအပူချိန်, ရာသီအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးတွေကိုအကြားရေတွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကိုသာတိုးအပူကြောင့်ဝတ်, ဒါပေမယ့်လည်းလေယာဉ်မှူးလည်း (စဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တွင်းထဲမှာတည်ရှိပါတယ် Hungaroring လမ်းကြောင်း၏ပထဝီတည်နေရာ၏) အနိမ့်ပျှမ်းမျှအမြန်နှုန်းကြောင့်အလုပ်အကိုင်အရှုပ်ထွေးကားအတွင်းပိုင်းကိုပိုပြီးလေထုစီးဆင်းမှုဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။
အဆိုပါယာ wear နှင့်ကျရှုံးမှုနှုန်းကအတော်လေးနိမ့်သည်။ ဒီနှစ်မှာတော့တာယာ, ယေဘုယျ 2018 အလတ်စားအကြံပြုမနှစ်ကညီမျှအဖြစ်ရွေးချယ်ပျော့နှင့်အစွန်းရောက်ပျော့မုန့်စိမ်းကိုခေါ်နိုင်ပါသည်။ C2 တာယာ (ခဲယဉ်းဟန်ဂေရီမှာ) အကြံပြုအဖြစ်အသုံးပြုလျှင်ပင်ထိုအချက်ကိုနှင့်ခက်ခဲရွေးချယ်မှုအလတ်စားမုန့်စိမ်း 2018 ထက်နည်းနည်းပျော့ပြောင်းပြီး။ ယခု 11 Grand Prix သဘောပေါက်သည်အထိအဆိုပြုထားပျော့ဖတ်အပေါငျးတို့သကိုးလူမျိုးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါ tortuous Hungaroring လမ်းကြောင်းထဲမှာအညီအမျှအရေးကြီးသောမြင့်မားတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာတစ်နှိပ်အင်အားသုံးပြီးကွေးအများအပြားပေမယ့်တာယာများ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ကိုင်ထားကျော်လွှားရန်ဆက်ခံအတွက်သင်း။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအနိုင်ရတဲ့မဟာဗျူဟာ, သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ရပ်နှင့်သာမာစီဒီးယာဉ်မောင်း Lewis က Hamilton က, 25 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပျော့တာယာမှတဆင့် (စုစုပေါင်း 70 ပတ်ပတ်လည်) ပတ်ပတ်လည် Ultra-ပျော့ခက်ခဲအကြမ်းတမ်းဆုံးမုန့်စိမ်းမဆိုမသုံးခဲ့ပါဘူး။ Ferrari ပြိုင်ကားယာဉ်မောင်း Sebastian Vettel တတိယအတွက်နှစ်ဦးစလုံးတွင်းကိုရပ်တန့်ရရှိသောခဲ့သည်အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာတစ်နေရာတည်းမှာမဟာဗျူဟာအသင်းဖော် Kimi Raikkonen နှင့်အတူပျော့အစွန်းရောက်ပျော့ရော်ဘာထံမှဖြတ်သန်း, ဒုတိယပြီးလေ၏။ ထို့ကြောင့်ပထမသုံးလေယာဉ်မှူးသုံးဦးကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာများလျှောက်ထားခဲ့သည်။
မိုက်ကယ် Schumacher အိတ်ထဲ၌လောင်းလျက်ရှိစံချိန်နှင့်အပြေးပြိုင်ပွဲနေဆဲ 2004 နှစ်ပေါင်းကတည်းကကျိုးပဲ့မခံစတင်ခဲ့ပါသည်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤတနင်္ဂနွေလည်းကျိုးကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်, ကြည့်ကြကုန်အံ့?
Mario ISOLA - F1 နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ကားပြိုင်ပွဲ
"ဟန်ဂေရီ, အ Grand Prix ပြိုင်ပွဲများတွင်ရိုးရာနွေရာသီချိုးအလွန်မဟာဗျူဟာကျရှုထောငျ့မှရာသီ၏ပထမအစိတ်အပိုင်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တောင်းဆိုနေတာရှေ့တော်၌ထိုနောက်ဆုံး။ ကြောင့်ရှေ့မှောက်၌ယာဉ်သွားလမ်းတိုဖို့အတော်လေးလှည်ဖြစ်ပြီး, လမ်းမထွက်သွားလျှင်ချော်၏အန္တရာယ်ကဆိုသည်။ ဒါကြောင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်း၏ကြီးမြတ်အရေးပါမှုနှင့်အနေအထားများမဟာဗျူဟာကသင့်လျော်သောဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အတိတ်ကာလ, ဖြောင့်မဟာဗျူဟာနှင့်ကျွန်တော်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလွှမ်းမိုးမှုကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်မြင်ကြပြီအဖြစ်အံ့သြစရာဘို့ကောင်းသောဖြစ်သော Hungaroring လမ်းကြောင်းအပေါ်အမြန်ဆုံးကားကိုမရလျှင်။ ကျနော်တို့အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာကိုမွငျလြှငျမိုးထိခိုက်ပြိုင်ပွဲအဆင့်အပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက်ယခုနှစ်တွင်တူညီတာယာအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည်တနင်္ဂနွေကျနော်တို့မတူကွဲပြားမှုအတွက်တူညီတဲ့မဟာဗျူဟာကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ "
ဖင်လန် Bottas ဗြိတိန် Grand Prix ရှေ့ပြေးအပေါ်အလေးပေး 02 / 07 / 2019 ဖင်လန်, 2017 ဖို့ငွေ Arrows (ထို Mercedes-Benz အဖွဲ့ Oklar- အဆိုပါငွေချစ်စနိုး) ပါဝင်ခဲ့။ နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေသြစတြီးယား Grand Prix အတွက်တတိယအဖွဲ့ join ယခုအခါဗြိတိသျှ Grand Prix အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖင်လန် Valtteri Bottas ရာသီ, လေးခုဖွင့်လှစ်ပြိုင်ပွဲအောင်ပွဲနှစ်ခုပြီးလေ၏။ အခြားနှစ်ခုမှာ Mercedes-AMG ကပက်ထရိုနပ်တပ်အားကစားအဖွဲ့သည်-အိမ်ထောင်ဖက်တွေဟာသူသည် Monster စွမ်းအင်ကားမောင်းသူ Lewis က Hamilton ကအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Lewis က, ကိုးလူမျိုးခြောက်အနိုင်ရခြင်းဖြင့်ပြိုင်ပွဲကိုဦးဆောင်နေသည်။ ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များ၏အလွန်açtı.valtterအကြားယခုလွန်းနောက်ကွယ်မှအဖွဲ့-အိမ်ထောင်ဖက်၏အောင်မြင်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုမိနေချင်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဗြိတိသျှ Grand Prix အတွက်ပြင်ဆင်နေ ...
အဆိုပါ Grand Prix ၏မြန်နှုန်းထောင့်ထံသို့ယူဆောင်ဗြိတိန်ရဲ့ခက်ခဲ Pirelli တာယာဖော်မြူလာ 1! 13 / 07 / 2019 ဘာရိန်းနှင့်စပိန်ခက်ဖြူအတွက်တတိယအကြိမ်ယခုနှစ်အပြီး Pirelli, အဝါရောင်အလတ်စားနှင့်အပျော့အနီအပါအဝင် Silverstone အတွက်အခက်ခဲဆုံးလူမျိုး, အအေးသုံးတာယာတတ်၏။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကဗြိတိသျှသီချင်းသစ်ကျော်ကြားသောအစာရှောင်ခြင်းထောင့်၌မြင့်စွမ်းအင်တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ 70 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတပ်အားကစား၏သန့်ရှင်းသောအရပ်တပါးပရိတ်သတ်တွေရဲ့အကြိုက်ဆုံးအကြားနေတုန်းပဲဖြစ်သကဲ့သို့အရပ်၏ Silverstone လမ်းကြောင်းအတွင်းပထမဆုံးကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Grand Prix အကြောင်းကို။ အစာရှောင်ခြင်းထောင့်မှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ကြောင်း Silverstone အပွေးပွိုငျလမျး features တွေ, အထူးသဖြင့်ပိုးတာယာ lineup အတွက် Becketts နှင့် Chapel သို့စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ကိုတင်, အများဆုံးမြန်နှုန်းမှာအားလုံးလေယာဉ်မှူးအထဲသို့ဝင်သော။ ရလဒ်အနေနဲ့အလွန်မြင့်မား ...
Ulaşımpark 2018 ဖြည့် Passes ဖြည့် 07 / 01 / 2019 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် affiliates Inc ကိုulaşımparkကြောင့် 2018 အတွက်ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သည်။ Kocaeli 2018 အတွက်အများပြည်သူအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများပေးUlaşımpark; Vatm ရာ၌ခန့်ထားပြီတဲ့သူနိုင်ငံသားများ၏လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်းများနှင့်လမ်းရထား drivers တွေကိုစုဆောင်းလေးစားမှုမှစီမံခန့်ခွဲသောဥပမာအားတန်ဖိုးထားတယ်။ အဆိုပါ 2018 န်ထမ်းများကပညာရေး၏လယ်ပြင်တွင်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများဆက်လက်အားလုံး drivers တွေကိုအမျိုးမျိုးသောပညာရေးဘာသာရပ်ulaşımparkထားရှိမည်။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံသားများပိုပြီးငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနှင့်၎င်း၏ပစ်မှတ်၏အဆင်ပြေခရီးသွားလာခဲ့ပါတယ်ပေး။ '' မာခ် 13816 '' QUALITY လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူulaşımparkသူသူတို့စင်ကြယ်သောအထောင်အသောင်းတို့ကရောက်ရှိလာသောခရီးသည်များအတွက်ဘတ်စ်ကား, ပေါ်ကိုအခြိနျအထိပျူငှါနွေးထွေးသောရည်မှန်းချက်အစ္စတန်ဘူလ်အချင်းချင်းဘတ်စ်ကား terminal ကိုသွားရောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းယူတဲ့အခါမှာ ...
IMM ကလေးများညီလာခံ, အားလပ်ရက်မိုးသီးမင်ျဂ Semester ဖြုန်းဖို့ 18 / 01 / 2019 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ကလေးများညီလာခံ, အဖွဲ့ဝင်များဒါစာသင်ချိုးဘို့လှုပ်ရှားမှုများဆက်တိုက်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ ကလေးတွေရာပေါင်းများစွာဖြစ်ရပ်များ, ပြတိုက်မှလာရောက်လည်ပတ်သူ, ငါးပြတိုက်ခရီးစဉ်, အားကစားနဲ့တက်ကြွတဲ့ခရီးသွားအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်အော်တိုမန်မော်ကွန်းထားရှိရေးပါလိမ့်မယ်။ ကလေးရဲ့ပါလီမန်အတွင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာလူငယ်နှင့်အားကစားအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညွှန်ကြားမှု, ညျ့အဝမှကျောင်းသားများ '' စာသင်ချိုးဘို့လှုပ်ရှားမှုများဆက်တိုက်စည်းရုံးရေးဖြစ်ပါတယ်။ သားသမီးရဲ့အားလပ်ရက်လှုပ်ရှားမှုများယနေ့ကိတ်ကွင်းမှာရေခဲပြင်စကိတ်စီးခြင်း Silivrikapi မှ IMM IMM ညီလာခံတွင်အဖွဲ့ဝင်နထေိုငျအတှေ့အကွုံအားဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မယ်။9ရက်ကြာအဖြစ်အပျက်, ကျွမ်းကျင်သူသင်တန်းပို့ချကနေသင်ခန်းစာတွေကိုယူပြီးကျောင်းသားများကိုရေခဲပေါ်နှိပ်များ၏စိတ်လှုပ်ရှားတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များများအတွက်ကလေးများပါလီမန် IMM အဖွဲ့ဝင်များ ...
ဝန်ကြီး Turan: "2019 တစ်နှစ်တာအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာတစ်နှစ်တာအလွန် Intensive ဖြစ်ကြလိမ့်မည် ' 01 / 01 / 2019 အဆိုပါထုတ်ဝေနှစ်သစ်ကူးရဲ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turan များအတွက်သတင်းစကား, "ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်, ငါတို့လူမျိုးနှင့်သစ်ကိုတစ်နှစ်လူသားအားလုံးဂုဏ်ပြု; ကြောင့် 2019 နှစ်ပေါင်း၏မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းတို့ကိုများပြားစေ, ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု, ညီအစ်ကိုများကိုငါစည်းလုံးညီညွတ်မှု၏ပါဝါကိုရှေ့ဆက်ဘာအတွက်တစ်နှစ်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်နယူးနှစ်မျှသံသယအသစ်များကို။ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အသစ်စိတ်လှုပ်ရှားဝင်ရောက်နေကြသည်။ 2018 နှစ်ကတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေအရေးကြီးသောစီမံကိန်းများကိုဆက်လက်အောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့သည့်အခါကတစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးနှင့်ပြင်ပမှာအဆိုးမြင်စိတ်တွေရှိနေသော်လည်းစတင်ပါပြီ။ အစ္စတန်ဘူလ်ကျနော်တို့အောက်တိုဘာလအတွင်းလေဆိပ် 29 ဝန်ဆောင်မှု၏ပထမအဆင့်တွင်ရှိသည်။ ပင်လယ်နက်အရှေ့နှင့်အရှေ့တောင် Anatolia မှ '' တောင်ပေါ်မှာ2သို့မဟုတ် 640 တထောင် Ovit Ovit အမြင့်ကိုဆက်သွယ် ...
ကျနော်တို့နှစ်သစ်ကူးမိသားစုဆန္ဒရှိ rayhab အဖြစ်ပျော်ရွှင်မှုကိုနှငျ့ပွညျ့စုံ 31 / 12 / 2014 ပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်ပြည့်စုံကျနော်တို့မိသားစုနှစ်သစ်ကူး rayhab ဆန္ဒရှိအဖြစ်: 2014 နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နာကျင်မှု, ငါတို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကျန်ရစ်လိမ့်မည်။ 2015 ပိုပြီးမျှော်လင့်ချက်ပိုမိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်, သငျသညျတစျလောကလုံးမှဆောင်ကြဉ်းပိုပြီးပျော်ရွှင်မှုကို။ သင်၏အသက်တာ, ပျော်ရွှင်အနာဂတ်မှလှပသောအနှစ်စစ်မှန်တဲ့ခင်မင်မှုကအမြဲသင်နှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်နှင့်သင့်ရဲ့ချစ်ရသူကျန်းမာရေး, ပျော်ရွှင်မှုကို, ဝမ်းမြောက်ခြင်း, အောင်မြင်မှု, ပိုက်ဆံအများကြီးမှနှစ်သစ်သူမေတ္တာနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ကြဉ်းဖို့မျှော်လင့်, ငါတို့သည်သင်တို့ 2015 အတွက်အစာရှောင်ရထားအတွက်အဆင်ပြေဘဝကိုအလိုရှိ၏။ မိသားစုလက်မှတ်ထိုး 26.000 သတင်းဆောင်းပါးတွေ rayhab မှ Proud ဖြစ်ပါသည်, တစ်နေ့လျှင် 25 တထောင်ဧည့်သည်များနှင့်အတူကျနော်တို့တူရကီအတွက် Alexa အဆင့်အတွက်ပထမဦးဆုံး4တထောင်က်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ကြသည်။ နောက်တဖန်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာနှစ်သစ်,
Wagon စက်ရုံကိစ္စ Sharp က Mesob ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏အာရုံကိုမှယူဆောင်ခဲ့သည် 21 / 04 / 2015 Wagon စက်ရုံကိစ္စအဆိုပါ Mesob Sharp ကနိုငျငံတျောသမ်မအာရုံကိုမှယူဆောင်ခဲ့သည်: တစ်ဦးချင်းစီရွေးကောက်ပွဲကို Mesob နိုင်ငံတော်သမ္မတ Shaukat ချွန်ထက်သည့်နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်များသည်ဤအချိန်မရောက်မှီအပြောင်းရွေ့တွင်နိုင်ငံရေးအစီအစဉ် "Wagon စက်ရုံ" အရာမှနှုတ်ဆောင်ခြင်းမပြုမီ။ မဖြစ်မီတစ်ဦးချင်းစီရွေးကောက်ပွဲကို Mesob နိုင်ငံတော်သမ္မတ Shaukat ချွန်ထက်သည့်နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်များသည်ဤအချိန်မရောက်မှီအပြောင်းရွေ့တွင်နိုင်ငံရေးအစီအစဉ် "Wagon စက်ရုံ" အရာဆောင်ခဲ့လေ၏။ ဝယ်ယူရေး၏ Wagon ပြုပြင်ရေးစက်ရုံဧရိယာ, TCDD5များ၏ရောင်းရငွေထဲကနေမထွက်စွန့်ပစ်သည့်လှည်းစက်ရုံ, Re-ပုဂ္ဂလိကပိုင်နှင့် ပတ်သက်. မိမိအစာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ Sharp က။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ချိတ်ဆက်အပေါငျးတို့သယူနစ်ရွေ့လျားကပြောသည်။ Sharp က "Malatya ပြီးနောက်ယခုနှစ် 50 မျက်နှာသာသူများသည်, ဤမြို့သည်လည်းမကြည့်သင့်ပါတယ်" ...
ကာလအတွက်Hüseyin Keskin တတိယလေဆိပ် 10 / 08 / 2016 အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တတိယကာလHüseyin Keskin လေဆိပ် 25 HDI လေဆိပ်စီးပွားရေး Inc ကိုရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်, ဟူစိန်ချွန်ခဲ့လေကြောင်းကဏ္ဍ၏ဝါရင့်တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးသစ်ကိုလေဆိပ်များ၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးထွက်သယ်ဆောင်ရန်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Hüseyin Keskin နှင့်အတူစတင်လုပ်ကိုင်သြဂုတ်လ 8 ၏သကဲ့သို့, သူလေကြောင်းကဏ္ဍတွင်အရေးကြီးသောစီမံကိန်းများကိုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။ တူရကီလေကြောင်းလိုင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်စီးပွားရေးတည်နေရာအသီးသီး HDI လေဆိပ်မှခန့်အပ်ထားသောမခံရမီ, ထို Keskin မဲဆန္ဒနယ်၌အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအတွက်တူရကီရဲ့အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ TGS ရာအရပ်ကဲ့သို့အပြေး; TAV Park ကဌာနချုပ်, Ido- အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးသည်လေကြောင်းနှင့်မြေပြင်စစ်ဆင်ရေးများအတွက် Holding ကုမ္ပဏီအလုပ်အမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိ TAV လေဆိပ် ...
Hüseyin Keskin,3။ ဒါဟာခရီးသည်-ဖော်ရွေလေဆိပ်ဖြစ်လိမ့်မည် 22 / 10 / 2016 Hüseyin Keskin,3။ ခရီးသည်-ဖော်ရွေလေဆိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်: အစ္စတန်ဘူလ်နယူးလေဆိပ်သူလေကြောင်းလိုင်းများများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်အလုပ်၏မူဘောင်အတွင်းက၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်လာတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထားသည့်အခါကမ္ဘာ့ '' ခြစ်ရာကနေဖန်ဆင်းတော် '' အစ္စတန်ဘူလ်နယူးလေဆိပ်များတွင်အကြီးဆုံးလေဆိပ်၏ခေါင်းစဉ်ကိုရပါလိမ့်မယ်, လေကြောင်းလိုင်းများများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်အလုပ်၏မူဘောင်အတွင်းက၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်လာတယ်။ တစ်နည်းမှာလေဆိပ်သစ်၏အသုံးချနေသဖြင့်တောင်းဆိုချက်များကိုစုဆောင်း, ကုမ္ပဏီများအတွက်ကြော်ငြာပါလိမ့်မယ်။ ဝန်ဆောင်မှုသို့အလုပ်အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌHüseyin Keskin ထားရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်တယ်ရာ HDI လေဆိပ်အော်ပရေတာအတွက်လေဆိပ်အတွက် 2018 ချောမွေ့စွာ, Habertürk'eသဘောထားမှတ်ချက်အားဖြင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, အသစ်ကလေဆိပ်ရဲ့ခရီးသည်-ဖော်ရွေပါလိမ့်မယ်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာလူတိုင်းထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ နယူး ...
2019 ဟနျဂရေီ Grand Prix
ဟနျဂရေီ Grand Prix
အရူးတူရကီ Demiryolc တစ်ရက်6ကီလိုမီတာ Ray လိမ့်မည် Tile
ဖင်လန် Bottas ဗြိတိန် Grand Prix ရှေ့ပြေးအပေါ်အလေးပေး
အဆိုပါ Grand Prix ၏မြန်နှုန်းထောင့်ထံသို့ယူဆောင်ဗြိတိန်ရဲ့ခက်ခဲ Pirelli တာယာဖော်မြူလာ 1!
Ulaşımpark 2018 ဖြည့် Passes ဖြည့်
IMM ကလေးများညီလာခံ, အားလပ်ရက်မိုးသီးမင်ျဂ Semester ဖြုန်းဖို့
ဝန်ကြီး Turan: "2019 တစ်နှစ်တာအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာတစ်နှစ်တာအလွန် Intensive ဖြစ်ကြလိမ့်မည် '
ကျနော်တို့နှစ်သစ်ကူးမိသားစုဆန္ဒရှိ rayhab အဖြစ်ပျော်ရွှင်မှုကိုနှငျ့ပွညျ့စုံ
Wagon စက်ရုံကိစ္စ Sharp က Mesob ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏အာရုံကိုမှယူဆောင်ခဲ့သည်
ကာလအတွက်Hüseyin Keskin တတိယလေဆိပ်
Hüseyin Keskin,3။ ဒါဟာခရီးသည်-ဖော်ရွေလေဆိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်